Electromagnetic Induction Sealer yeAluminium Foil Kuisa chisimbiso
musha / Induction Kuisa Muchina Machine / Induction Sealer
Category: Induction Kuisa Muchina Machine Tags: aruminiyamu foil yekuisa chisimbiso muchina, otomatiki induction chisimbiso, bhodhoro induction chisimbiso, tenga induction sealer, cap induction chisimbiso, chivharo sealer muchina, chivharo chekuisa chisimbiso muchina, inoenderera induction sealer, remagetsi induction chisimbiso, Electromagnetic induction yekuisa muchina, enercon induction chisimbiso, kupisa induction chisimbiso, induction cap chisimbiso, induction cap yekuisa chisimbiso muchina, induction foil chisimbiso, induction foil sealer mutengo, induction chisimbiso, induction sealer mutengo, kuburitsa kuiswa chisimbiso, induction yekuisa chisimbiso muchina
Aluminium Foil Electromagnetic Induction Sealer
Chii chinonzi "Induction aluminium pepi yekuisa chisimbiso muchina"?
Electromagnetic induction chisimbiso inoshandiswa PP, PE, PET, PS, ABS, HDPE, LDPE uye mabhodhoro egirazi, ayo anoshandisa remagetsi musimboti kuburitsa pakarepo kupisa kwakanyanya kuti unyungudhe aruminiyamu foil iyo inonamatira kuvhurwa kwemabhodhoro, ichisvika kune chinangwa chemvura-chiratidzo , leakage-proof, mildew-proof uye inowedzera nguva yekuchengetedza.
Rudzi rwakajairika rwechisimbiso chemukati chidimbu chechipiri chemukati chisimbiso chinosiya chechipiri chisimbiso mukati memakapisi kana chisimbiso chekubvisa chabviswa. Izvi zvinowanzo shandiswa uko nyaya dzekudonha dzinonetsa. Imwe sarudzo ndeye chidimbu chimwe chete chemukati chisimbiso uko kana chidimbu chekubvisa chabviswa hapana liner rakasara mukuvhara. Iwe unogona zvakare kusarudza kubva kuzvisimbiso zvine pulltab kana dziya dzine chisimbiso chinotsemuka pasina kusiya zvakasara pabhodhoro. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti liner inoenderana neyebhodhoro zvinhu.
mhando 2500W 1800W 1300W
Product Material Simbi isina ngura
Simbiso dhayamita 60-180mm 50-120mm 15-60mm
Kuiswa chisimbiso Speed 20-300 mabhodhoro / min
Chinjana Yekumhanyisa 0-12.5m / min
Kuisa chisimbiso Kureba 20-280mm 20-180mm
chiyamuro Voltage Chikamu chimwe chete, 220V, 50 / 60Hz
Inoshandiswa mashoko PP, PE, PET, PS, ABS, HDPE, LDPE uye mabhodhoro egirazi, Plastic bhodhoro muromo aruminiyamu foil firimu
uremu 72kg 51kg 38kg
Chii chinonzi Induction Kuisa chisimbiso?
Kuchengeta chisimbiso ndiyo isiri-yekudyidzana nzira yekubatanidza zvinhu zvakagadzirwa kubva kune thermoplastics kuburikidza nemagetsi emagetsi induction iyo inogadzira eddy mafungu ekupisa zvinhu. Muindasitiri yekupakata, maitiro aya anoshandiswa kumisikidza hermetically chisimbi chemidziyo chivharo chine foil laminate inovharika nekupisa. Muchiitiko cheedu Aluminium Foil Induction Sealer Equipment, iyo foil laminate ndeye aluminium kupisa induction liner.
Iyi michina yekupakata inoshandiswa kune hermetically chisimbiso girazi uye midziyo yepurasitiki kuburikidza neyakagadziriswa induction yekuwedzera chigadzirwa pasherufu hupenyu, kudzivirira kuburitsa, uye kunyanya kupa zvisungo zvinoonekera. Aluminium foil induction inogona seamer michina inowanikwa mune emagetsi-inofambiswa, ruoko, uye manyorerwo dhizaini yekuisa chisimbiso akasiyana ekuvharisa saizi.
Chii chinonzi Aluminium Heat Induction Liner?
Iwe waona zvinhu izvi zvakafukidza mabhodhoro nemidziyo yejagi kana iwe ukavhura chigadzirwa chakapakirwa senge nzungu bhinzi kana mishonga yemumabhodhoro Iyo aluminium kupisa induction liner ndeye sirivheri foil pakuvhura kwechengeti inoratidza kuti chigadzirwa chakaputirwa chinokanganisa-chiri pachena. Ivo vanoda aruminiyamu foil induction inogona kusimbisa michina kuti inamate zvakanaka aya liners kune can.
Zvakare, yakajairwa aluminium kupisa induction liner mukati memusoro chivharo chakazara-chakaumbwa chinoumbwa neanotevera akarongeka akarongedzwa uye akagadzirwa materu.
Mapurpu mapepa ebhodhi
Iyo aluminium foil yakaturikidzana
Iyo yepamusoro yepamusoro, inova pulp paperboard rukoko, matendere pakatarisana nechikamu chemukati chechivharo uye chakanamatira pairi. Inoteverwa nerafa rewakisi rinoshandiswa kusunga pulp mapepa ebhodhi kune iyo yechitatu dura, iyo aluminium pepi, inova iyo dura inonamatira kumudziyo. Iyo yekupedzisira dura pazasi ndiyo polymer layer iyo inoratidzika kunge yepurasitiki firimu.
Aya mana akaturikidzana anoshanda pamwechete kuitira kuti awane anodiwa madhijitori ekubudirira induction maitiro ekugadzira chisimbiso chisina mweya.
Induction Simbiso Zvikumbiro
HLQ aluminium foil induction yekuisa michina yezvikopu zvemakona zvakakosha zvekuisa chisimbiso chikafu, zvinwiwa, zvigadzirwa zvekurapa, uye zvekuzora pakati pevamwe mumhando dzakasiyana dzemabhodhoro, senge mabhodhoro akakomberedza uye akaenzana, akagadzirwa nepurasitiki.
Zvakare, pazasi pane akasiyana maindasitiri uye zvigadzirwa izvo LPE inogona seaming michina inogona kubata.
Beverage Indasitiri Waini, Doro remumagaba, Soda, Mvura, Cider, Muto, Kofi neTii, Zvinwiwa zvine Carbonated
Food Industry Nyama, Zvokudya zvegungwa, Muriwo, Zvibereko, Sauce, Jam, Tuna, Soup, Cannabis, Uchi, Nutrition Powder, Yakaomeswa Chikafu (senge nzungu, zviyo, mupunga, nezvimwewo)
Chemishonga Indasitiri Zvipfuyo, Zvekurapa, Poda, Mapiritsi, Mishonga mbishi zvinhu
Chemical Indasitiri Mafuta ekubika, mafuta eLube, Glue, Paint, Chemakemikari epurazi, Kuchenesa mvura, Ink uye lacquers, Nuclear marara uye zvine radioactive zvinhu, ZveMota Mvura (peturu, mafuta, uye dhiziri)
Mashandiro anoita Aluminium Electromanegic Induction Sealer Anoshanda
Iyo induction yekuisa chisimbiso maitiro inotanga nekupa iyo yatove chigadzirwa-yakazadza cap-mudziyo musanganiswa kune iyo aluminium foil induction inogona seaming muchina. Iyo chivharo chatova nealuminium foil kupisa induction liner yakaiswa mukati mayo isati yaiswa mumudziyo.
Iyo cap-container musanganiswa inopfuura pasi pemusoro we seamer, iyo irikuburitsa nzvimbo inokatyamadza magetsi, kuburikidza neyakafambisa conveyor. Sezvo bhodhoro richipfuura pasi pemusoro we seamer, iyo aruminiyamu foil kupisa induction liner inotanga kupisa nekuda kwemaddy mafungu. Iyo yakisi yakatetepa, inova yechipiri dura reiyo induction liner, inonyungudika uye inosvitswa neiyo yepamusoro-soro - pulp mapepa ebhodhi.
Kana wakisi yanyungudika zvachose, chetatu (iyo aruminiyamu pepa) inosunungurwa kubva pachivharo. Iyo yekupedzisira liner yakatetepa, iyo polymer riya, zvakare inopisa uye inonyungudika pamuromo wepurasitiki wemidziyo. Kamwe iyo polymer painotonhora pasi, chisungo chakagadzirwa pakati peiyo polymer nemudziyo chinogadzira chigadzirwa chakavharidzirwa.
Kuiswa chisimbiso kwese hakuiti kukanganisa chigadzirwa mukati memudziyo. Kunyangwe zvichikwanisika kuti foil kupisa kupisa kuitike izvo zvinokanganisa kukuvara kune iyo nhete yechisimbiso zvichikonzera zvisirizvo zvisimbiso. Kuti udzivise izvi, LPE inoita strick yemhando yekutarisa kuburikidza neyese nzira yekugadzira yeyako yakagadzirirwa aluminium foil induction inogona seamer zvishandiso.
Pamberi pekugadzira maitiro, tinoita kubvunzana kwakakura newe kuti unzwisise zvaunoda. Izvi zvinobatsira pakusarudza yakakodzera sisitimu inodiwa kubata chakasarudzika chigadzirwa senge inodiwa muchina sizing kune yakasimbiswa yakachengeteka yekupakata tambo.